लकडाउनमा सेक्सः दम्पत्ती मस्त, डेटिङकालाई यस्तोसम्म कष्ट
एजेन्सी काठमाडाैं, २ बैशाख
खुला समयमा पनि डेटिङ गर्नमा कठिनाइ आउँछ । विश्वको एक चौथाई जनसंख्या लकडाउनमा रहेका बेला डेटिङ र सेक्समा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । चीनदेखि लिएर बेलायतसम्म, नेपाल, भारतदेखि स्पेन र सिंगो युरोपसम्म हरेक स्थानमा सामाजिक दूरीको अभ्यास गर्नुपरेको छ अहिले ।
आमरूपमा परिचित मान्छेले जस्तो व्यवहार हुने गरेको थियो, त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार सिक्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसारभरमा डेटिङ र सम्बन्धमा समेत असर परेको छ । विवाहितहरूको याैन जीवनमा त्यति धेरै असर नपरे पनि प्रेम सम्बन्धमा भएकाहरूलाई भने लकडाउनले समस्या पारेको छ । संसारका ५ अलग अलग स्थानका ५ व्यक्तिले आफ्नो डेटिङबारे आफ्नो कहानी यसरी बताएका छन् ।
हान लकडाउन लगाउनुभन्दा १ साताअघि ब्वाई फ्रेन्डसँग मेरो ब्रेकअप भएको थियो । यसपछि चीनको अर्को शहरमा पनि यस्तै प्रकारको प्रतिबन्ध लाग्यो । यस्तो हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन । यो मेरा लागि कठिनाइको क्षण थियो किनकि यस्तो कठिन अवस्थालाई मैले एक्लै झेल्नुपर्‍यो ।
यस्तो लागिरहेको छ कि तपाईं पूर्ण रूपमा एकान्तमा हुनुहुन्छ र एकान्तवासमा नै भइन्छ जस्तो लाग्छ । यो सुरक्षित पनि छ तर कुनै समयमा कुनै साथीलाई भेट्न, छुन र महसुस गर्न मन लाग्छ । जुन व्यक्तिसँग तपाईं डेटिङ गरिरहनुभएको छ, उसका बारेमा जान्न पनि कठिन हुने रहेछ । अनलाइन डेटिङमा कोरोना भाइरस फैलिएको समयमा कठिनाइ बढी हुन्छ ।
तपाईं एक अपरिचित मानिससँग कसरी भेट्नुहुन्छ ? कोरोना भाइरसबाट मुक्त छ या छैन भन्ने जानकारी नभई भेट्न सकिँदैन । यो झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । म डेटिङ एप्सबाट पनि बिदा लिँदै छु किनकि यहाँबाट केही प्राप्ति हुँदैन । इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने अहिलेको अवस्था छिट्टै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
हाम्रो दोस्रो डेट अनलाइन बबलमा भयो । म वास्तविकतामा लाइन क्रस गरेर विना लाइन एकअर्काको नजिक जान चाहन्थेँ ।
मैले आफ्नो कहानी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेँ र यो भाइरल बन्यो । यदि लकडाउन थिएन भने यो सम्भव थिएन । म एक जना राम्रो साथी पाएर धेरै खुसी भएको छु ।
कोभिड- १९ को संक्रमण संसारमा खतरा बन्नुभन्दा अघि म कसैसँग क्याजुएल सम्बन्धमा थिएँ । हामी दैनिक एकअर्कालाई भेट्ने गर्थ्यौं तर म मानसिक रूपमा यो सम्बन्धमा जोडिन चाहन्नथेँ । म यसलाई विस्तारो गतिमा लैजान चाहन्थेँ तर कसले यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेको थियो र ?
यो समयमा कंगोमा लकडाउन छैन तर म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु ।मैले भाइरसको खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएकी छु । यस कारण मैले ४ साताका लागि नभेट्ने निधो गरेँ । मैले उसलाई यो किन जरुरी छ भनेर सम्झाएँ ।
तर, उसले मलाई अरू कसैसँग भेट्न बहाना गरेको ठान्छ र यो कुराले ऊ पागल जस्तै भएको छ । म पनि उसको कमी महसुस गर्छु र मैले कसैलाई मेरो जीवनमा कसैलाई स्थायी रूपमा सामेल गर्ने मौका गुमाइरहेकी छु । उसले मलाई पर्खिंदैन भन्ने कुराको डरले सताइरहेको छ । म शारीरिक अन्तरङ्गताको कमी महसुस गरिरहेकी छु ।
हामी सबैलाई शारीरिक सम्बन्धको चाहना हुन्छ । यस्तोमा वैकल्पिक बाटो खोज्छन्, मेरो ब्वाइफ्रेन्डलाई यो कुरा थाहा थियो र उनले आफ्नोतर्फबाट राम्रो सम्बन्ध बनाउन कोसिस गरेका थिए ।
अचानक लकडाउन सुरु भएपछि हामीबीचको सम्बन्धमा लामो दूरी पैदा भएको छ । हामी छुट्टिनका लागि मानसिक रूपमा पनि तयार थिएनौँ । हामी दिनमा ६ पटकसम्म भिडियो कल गर्छौं । हामी कुराकानी गर्दै फिल्म हेर्छौं । क्विज खेल्न मन लागेको बेला अनलाइन क्विज खेल्छौँ ।
यस्ता तरिकाले हामी अलग रहेर पनि एक साथ हुने कोसिस गरिरहेका छौँ । यस्तो अवस्था देखेर हामी हाँस्छौँ पनि । यो सङ्कटबाट बाहिर निस्किएपछि हामीले प्रेमसम्बन्धको सुरुवातमै कत्रो चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो भन्ने सुनाउनेछौँ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २, २०७७, १५:१०:००